Malunga nathi-iNanjing Liyuan yoGcino lwezixhobo Co., Ltd
Indawo yokubeka ipallet
Umsebenzi weShelfu yokuKhanya
Uyilo Special yokubeka
Ipallet yentsimbi kunye nezixhobo zokusebenza
Inkqubo ye-AS / RS
Iimveliso ezikumgangatho ophezulu
INanjing Liyuan Storage Equipment Co, Ltd yinkampani egxila kuyilo, ukubonelela kunye nokufakwa kweenkqubo zokugcina izinto. Sineqela lobuchwephesha, abasebenzi abanezakhono, iqela elikhulu lokuthengisa kunye neeyure ezingama-24 kwi-intanethi emva kwenkonzo yokuthengisa.
Iimveliso zethu eziphambili ingqokelela yokubeka, mezzanine umgangatho, mezzanine yokubeka, pallet yokubeka, longspan kweeshelfu, ukuqhuba emanqanqweni, cantilever zorhwebo, iikhetshi zokugcina, isiphekepheke yokubeka, ASRS inkqubo zokwenza izinto njalo njalo. Zisetyenziswa ngokubanzi kumashishini amaninzi, ezinjengevenkile ezinkulu, ishishini lokutya, ilaphu, itayere njl.
Ngomgaqo "Umgangatho yiNkcubeko yethu", inikezela abathengi ngenkonzo yokumisa enye, isicwangciso sobuchule, ixabiso lokukhuphisana kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu. Sinokuthenjwa okuvela kubathengi kwihlabathi liphela.
INanjing Liyuan yoGcino lwezixhobo Co., Ltd ngumzi mveliso owaziwayo wase China wenkqubo yokugcina ngokungxamisekileyo. Zonke iimveliso zethu zinokwenza isiko kubaxumi. Ngokuhamba kwexesha, sihlaziya oomatshini abaninzi abatsha kwimveliso yokurhabaxa.
1. 10sets umgca oluzenzekelayo roll bokwakha
2. Iiseti ezili-12 zokubetha umatshini, 1set125t, 1set80t, 2sets63t, kunye ne-8sets25t
3. 6sets oluzenzekelayo umqadi iwelding umatshini
4. 15sets oluzenzekelayo umatshini ingalo irobhothi
5. 3sets umatshini ipleyiti ukusika
6. 5sets ukugoba umatshini
7. 2sets umatshini sawing
8. 2sets powder umgubo wokutyabeka
I-Ofisi Yongeza: Igumbi le-103, Ukwakha i-3, i-No100-3, iLaiyinda Road, iDongshan Street, iSithili seJiangning, isiXeko saseNanjing, kwiPhondo laseJiangsu, China.
Factory Dibanisa: Jinshan Industrial Park, Shunan Town, Yian District, Tongling City, Anhui kwiPhondo, China